Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ရူးသွပ်ခဲ့သောနေ့
Writer Sein Lyan Time 11:31 pm
ဟုတ်နေပြန်တယ် ... နေ့တိုင်းတော့ မိုးမရွာလောက်ပါဘူး ..နေလည်းသာဦးမှာပါ ..
ဟီး... ဆိုးလိုက်တဲ့ ကံ... ဘယ်လို စခန်းသွား တစ်ညလုံး....း)
ကိုဖိုးစိန် အဲ့သလောက်လုပ်ပြီး ပြန်ရတဲ့ငွေနဲ့ မဖြစ်မနေကုန်ကျစရိတ်နူတ်ပြီးတဲ့အခါ ကျန်တဲ့ငွေကိုရော ဒေါသဖြစ်ရသေးလား..(ကျနော်ကဖြစ်ရတာမို့...) မိသားစုအတွက် တယောက် သို့ နှစ်ယောက်သုံးယောက်
အလျှော်ပေးရတဲ့ ဘ၀တွေ အကြောင်း ဖတ်ချင်သေးပါတယ်ဗျာ..
Never give up, bro. Like Ma Gyi Naw said, every day is not raining. There will be sunny days as well. :)
မိသားစုနဲ့ ခွဲနေရတဲ့ အဝေးရောက်ဘ၀တွေတိုင်း ယောင်္ကျားတန်မဲ့ တစ်ယောက်တည်း ကြိတ်လို့မျက်ရည်ကျခဲ့ရတဲ့ နေ့ရက်တွေ ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒုက္ခဆိုတာ အိမ်သာတက်ချင်စိတ် ဖြစ်သလိုပဲတဲ့..။ ဗိုက်အရမ်းနာနေတုန်းသာ အလူးအလဲဖြစ်နေခဲ့တာ၊ အိမ်သာလည်းတက်ပြီးရော ဗိုက်နာခဲ့တာတွေ လုံးဝကိုမေ့သွားပြီး လုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်နေနိုင်ကြတာပါပဲ။ အဲဒီလိုပဲ သဘောထားနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုတယ်။း)
13 November 2009 at 03:49
*It's whatabad day* ပေါ့။
မြင်သေးပါတယ်။ စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ပေါင်မုန့်ကို စူပွစူပွ ကိုက်နေမဲ့ မျောက်ငို ကိုလေ။
နေသာတဲ့ နေ့တွေကို ပို တန်ဖိုးထားပေါ့။
ခုလို ကံဆိုးတဲ့ မိုးတွေသည်းသည်း နေ့တွေကို နေသာခဲ့တဲ့ ရက်တွေနဲ့ အချိုး ပြန်ချကြည့်လိုက်။
မိုးရွာရွာ၊ နေပူပူ.. လျှောက်ရမဲ့ လမ်းကို (ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့လမ်းကို ကိုယ်က မရွေးချယ်နိုင်သေးခိုက်မှာ)စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ထိခိုက်ကင်းစွာ လျှောက်နိုင်ပါစေ။
13 November 2009 at 04:44
ကိုမောင်ဟန် ပြောသွားသလိုပါ စိန်...
ရွှေရောင် နေ့ရက်တွေ ရောက်လာမှာပါ...
13 November 2009 at 05:49
ကြိုးစားနေတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက် အတွက်ကတော့ ဒီမိုးလေးရွာတာ ဘာဟုတ်တာမှတ်လို့.. မဟုတ်ဘူးလား..
အဲ့ဒီ သမ္မာအာဇီဝတွေက တစ်ရက်ကျ ရာသီလှလှဆီ အရောက်ပို့လိမ့်မယ်..
well.. you survived, and that's what matters, isn't it?
တစ်ချိန်က ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒက္ခတွေဟာ
နောင်တစ်ချိန်မှာ သူခတွေ ဖြစ်လာမှာပါ..
ဘဝ ဆိုတာ ဒါပဲလေ...
အသက်နဲ့ ဘဝကို ဥာဏ်စောင့်တယ်တဲ့....
ရူးသွတ်တဲ့ နေ့ တွေ ကျော်လွန်ရင်? ပျော်စရာနေ့ တွေလဲရှိမှာပေါ့ရူးသွပ်တဲ့့နေ့ တွေရဲ့ အတွေ့ ကြုံခါးသီးမှုတွေဟာ ပျော်စရာနေ့ တွေ အတွက် ချိုမြိန်မှုကို အဓိပါယ်ရှိစေခဲ့ မှာပါ တကယ်ဆို စကာင်္ပူသွားရန် ၁၅ရက်သာလိုတော့ သည် ဆိုတဲ့ အတွေးက ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုင်မှာအမှန် အဲဒီအတွေးလေးနဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေဖြေလိုက် အရာရာဟာပျော်စရာတွေဖြစ်သွားမယ် ညီ့ ကို အားပေးဖြေသိမ့် ရင်း ကိုကြီး သုဒြေ္န
ဪ ..ကံဆိုးမျောက်သွားရာ မိုးလိုက်လို့ရွာ လို့ပဲ ပြောရတော့ မလို ဖြစ်နေပြီ ...
ကျန်းမာရေး က ပို အရေးကြီးတယ်ဝေးးး
တော်ကြာနေ အပ်နဲ့ ထွင်းရမဲ့ဟာကို ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်နေရအုံးမယ် ...
ကံက အမြဲတော့လည်း မဆိုးနေနိုင်ပါဘူး ။။
ကံကောင်းခြင်း မနက်ဖြန်များ ရှိလာမှာပါ။။။
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကိုဂျီးရာ .. =(
( သနားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး .. သနားတယ်ဆိုတာ အထင်သေးခြင်းတစ်မျိုးပဲလေ.. ကျနော်က ဒုက္ခခြင်း ကိုယ်ချင်းစာမိတာပါ .. )
သြော် .. ကျနော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ် .. ခရီးက ပြန်ရောက်ရောက်ခြင်း ကိုဂျီးအိမ်မှာ မဖတ်ရသေးသမျှ ဖတ်လိုက်တာ .. မိသားစုလေး ကမ္ဘာပျက်မတတ်ဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့အချိန်ပိုစ့်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ .. မန့်ရမှာ အများကြီးဖြစ်နေလို့ မနိုင်တော့လို့ တိတ်တိတ်လေးပဲဖတ်လိုက်ရပေမယ့် ကျနော်ကြိုက်မိတဲ့ဟာကို ခုသတိရလို့ ပြောလိုက်တာပါ .. =)
14 November 2009 at 07:04
ပိုက်ဆံရျှာရတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက် ဈေးကြီတံဲ့စလုံးမှာငါးပတ်တောင် နေချင်ရတာလဲ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားတင်းထားရမှာပေါ့နော် .. အကုန်လုံးက အားပေးစကားပြောပြီးသွားကြပြီ .. မနှင်းပြောသလိုပဲ အသက်ကို ဥာဏ်စောင့်တယ် .. သိပ် မပေပါနဲ့ .. ပိုက်ဆံဆိုတာ ကိုယ် အသက်ရှင်နေသရွေ့ရှာနေရမှာပဲ .. လုပ်သင့်တာတွေ လုပ်ကို လုပ်ရမယ် ဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးကိုတော့ အထူး ဂရုစိုက်ပါ ..း))
အမြဲတမ်း ကျန်းမာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ ..း))
ကိုဖိုးစိန် ကျန်းမာရေးလည်းဂရုစိုက်လိုက်ဦးနော်.... ထမင်းစားလိုက်ဦးနော်.... ထမင်းမစားပဲ သိပ်မနေနဲ့ဗျ... ခေါင်းကိုက်တာအပြင် အစာအိမ်ပါဖြစ်မှာစိုးရတယ်ဗျာ... ကံကလည်းအမြဲမဆိုးနိုင်ပါဘူးဗျာ... အောင်မြင်ပါစေ...
လာလည်ဖြစ်တာတော့ခဏခဏပါပဲ။ ကွန်မန့်သာမရေးဖြစ်တာ.။ဒီတစ်ခါတော့ခံစားချက်တွေတော်တော်လေးတိုက်ဆိုင်လို့ ရေးလိုက်တာ။ ဒီလိုပါပဲကိုဖိုးစိန် ရပ်ဝေးကိုတစ်ယောက်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေ အားလုံးအတွက်ကတော့ တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါမှာ စိတ်ညစ်ရတာတွေကြုံတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မကျန်းမာတဲ့အခါမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကို သေချာဂရုစိုက်ပေါ့ဗျာ။
mad of the day ကို သရုပ်ဖော်တာ လူကို ရူးချင်သွားတာပဲ...
ဒါနဲ့ မျက်ရည်ကျပြီး နှပ်က တရှုံ့ရှုံ့ အမြဲထွက်တတ်သလား...
ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက် စိတ်ထဲမှာ ခံစားရမယ်ဆိုတာ ဖတ်ရင်းခံစားလို့ရတယ်ဟ။ အားတင်းထား သူငယ်ချင်း
ဖိုးစိန်ရယ် နင်ရေးတာ ဖတ်ရတာ ငါတော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်.... တောက်ကွာ နင်လာခဲ့စမ်း စလုံးကို နင့်ကို နှင်းပေးမယ်။ နှိပ်ပေးမယ်။ ဟုတ်ပြီလား ?
နေကောင်းဖို့ သာကြိုးစားပါ။ ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်။
ပန်းချီးလေးက လှလိုက်တာ ဘူ့လက်ရာလေးလဲဟင်.. ဟဲဟဲ